Madaxii baaritaanka weerar ay Al-Shabaab fulisay oo geeriyootay
Dhimashadda ayaa waxay timid saacado kadib markii ay kasoo laabatay socdaal dhanka dibadda ah.
NAIROBI, Kenya – Sarkaal sarre oo ka tirsan Booliska la dagaalanka argagixisadda ee dalka Kenya ayaa miyir-beeshay kadibna ku geeriyootay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta, shalay oo Sabti ahayd.
Monica Wambui Githaiga, oo hogaamineysay baaritaanka weerarkii Al-Shabaab ee DusitD2, ayaa loola cararay isbitaal ku dhexyaala madaarka, balse dedaalo lagu badbaadinayey nolosheeda ma mirodhalin.
Wargeyska Daily Nation ayaa baahiyey in Ms Githaiga ay kasoo laabatay Japan, halkaas oo ay kusoo qaadatay tababar gaaban.
Shirka Duulimaadka Itoobiya ee Ethiopian Airlines ayay la socotay iyadda oo saacado kusoo hakatay Dubai oo Imaaraadka ka tirsan.
Mudadii ay ku sugneyd Dubai waxay kusoo wargelisay booliska in ay dareemeyso in caafimaadkeeda uusan taam ahayn.
Warbixin laga helay bileyska ayaa lagu sheegay in markii ay kasoo degtay garoonka ay u sheegtay ciidamada in ay wajaheyso madax wareer ayna xanuun ka dareemeyso dhanka xabadka.
"Waxay bilowday inay ka cabato madax wareer iyo xanuun laabta ah. Kadib waxay bilawday matag, waxaa loola cararay xarunta caafimaad, laakiin nasiib xumo way dhimatay," ayuu sarkaal sarre oo bileyska ah.
Illaa iyo haatan ma cadda sababta ka dambeysa geerida haweenayda oo lagu waddo in lagu aaso khabuuraha magaaladda Nairobi.
Duulaankii Al-Shabaab ee huteelka loo tamashlo tago ee DusitD2 oo dhacay 16-kii Janaayo ee sanadkan 2019-ka ayaa waxaa lagu khaarijiyey in ka badan 20 ruux oo ay ku jiraan muwaadiniin reer Galbeed ah.
Eedeysaneyaasha loo xiray gulufkan oo Al-Shabaab sheegtay in ay ugu aar-gudeysay aqoonsashada Donald Trump ee in Quddus ay tahay caasimadda Yahuuda ayaa xabsi ku jira lana hakaiyey maxkamadeyntooda.
Kenya oo u baroor-diiqeysa saraakiil ay Al-Shabaab ku dishay qarax
Afrika 13.10.2019. 19:02
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo bayaan soo saarey ayaa balanqaad u sameeyay eheladda askarta geeriyootay.
Kenya oo shaacisay Magaca mid kamida ragii weeraray Dusit D2 Hote
Afrika 16.01.2019. 13:39